HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 20-JULY-2020
Monday July 20, 2020 - 11:05:49 in Wararka by Mogadishu Times
Jubbaland oo War kasoo saartay kulan kii Md. Farmaajo iyo Axmed Madoobe Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa Madaxtooyadda M/ Dhuu samareeb kulan kula qaatay Madaxweyna ha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Ax med Madoobe. Qoraal
Jubbaland oo War kasoo saartay kulan kii Md. Farmaajo iyo Axmed Madoobe Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa Madaxtooyadda M/ Dhuu samareeb kulan kula qaatay Madaxweyna ha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Ax med Madoobe. Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxwey ne Axmed Madoobe ayaa waxaa lagu shee gay in kulanka dhexmaray labada dhinac uu ka koobnaa salaan iyo is arag gogol xaar ah u ah wadahadalada qorsheysan ee lagu xali nayo khilaafka mudada soo jiitamayey ee dowladda Federaalka iyo Jubbaland. Kulanka dhexmaray Madaxweyne Farma ajo iyo Madaxweynaha Jubbaland ayaa bilo wgiisa hore waxaa goobjoog ka ahaa Ra'ii sul Wasaarada Xukuumadda Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweynaha Maamulka Galm udug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, iy adoo markii dambe ay isku keli noqdeen Farmaajo iyo Axmed Madoobe. Ma jiro wax sawirro ah oo laga helay kul anka Madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Ma doobe, hayeeshee waxaa la sheegayaa in dhanka Jubbaland dalbadeen in aan wax muuqaal ama sawirro laga baahin kulankan, maadaama uu yahay mid hordhac ah.
Khasaaro ka dhashay weerarkii lagu qa aday Guriga mingiska lagu tumayay
Faah faahino ayaa kasoo baxaya Nin hu beysan oo weerar ku qaaday salaadii casir kadib Guri Mingiska lagu tumo oo ku yaalla Degmada Warta-nabadda ee Gobolkaan Banaadir.
Nin ku hubeysan qori AK47 ayaa rasaas xooggan ku furay dadweyne badan oo ku sugnaa Guriga lagu tumaayay Mingiska oo sigaar ah ugu yaalla agagaarka Masjidka Xaaji Yuusuf ee Degmada Warta-nabadda.
Dad goobjoogayaal ah oo la hadlay Warbaainta muqdisho ayaa waxaa ay u she egeen in weerarkaas uu ka dhashay Khasa aro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee guriga ku sugnaa.
Ugu yaraan 3 ruux ayaa ku geeriyooday weerarka rasaasta ahaa ee lagu furay Gur iga, halka 9 qof kalena oo u badnaa Haween ay ku dhaawacmeen, isla markaana waxaa si Deg deg ah loogu qaaday Xarun Caa fimaad oo ku taalla Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda ayaa tegay Guriga uu falku ka dhacay, waxa ana sidoo kalena ay wadaan baaritaano kala duwan oo ay raadinayan Ninkii weerarka geystay goobta ka baxsaday, lana sheegay in xoogaa Madaxa looga jiray.
Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya in Guriga weerarka lagu qaaday markastu lagu tumi jiray Mingiska, isla mark aana halkaas ay tegi jireen dad kala duwan, waxaana Sawirro laga soo qaaday Guriga uu muujinayay inuu ku yaallo xaafad isku raran ah.
Dhawaan ayay aheyd markii Nin ku hu beysnaa Qori Ak47 uu weerar ku qaaday Gu ri ay ku sugnaayeen dad isku qoys ah oo ku yaalla de egaanka Tabeellaha Sheekh Ibraa him ee duleedka Muqdisho, waxaana ku dhi ntay 4 qof, halka tirro kalena ay ku dhaaw acmeen.kaaso u baxsaday magaalda gaalkacyo iyadoo ciidmada boliiska galmudug ay gacata ku soo dhigeen haatan la soo gaarsiiyey magalda muqdisho isagoo haatan ku jira gacanta dowladda Sugayana In La Xukumo.
Dowladda oo Gaadiid ku wareejisay Maamulka Galmudug
Wasaarada Beeraha Dowlada Faderaal ka ayaa shan gaari oo ah nuuca Soomaalida u yaqaano Cabdi-bilaha iyo agab ay ka mid yihiin matooro ku wareejisay Wasaarada Beeraha Dhirta iyo Daaqa Galmudug .
Wasiirka Beeraha Dowladda Faderaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa furaya asha Shan Gaari ku wareejiyay Wasiirka bee raha dhirta iyo daaqa Galmudug Axmad Nuur Xaaji Cismqan oo ay wehliyeen Wasiir ku xigeenka Wasaaradda beeraha Galmud ug, Agaasimaha guud ee Wasaaradda, agaa simaha plant protection-ka iyo agaas imayaasha waaxaha .
Gaadiidkan iyo matoorada saaran ayaa loo adeegsan doonaa dagaalka lagula jiro Anyaxa ku habsadey dhul daaqsimeedka iyo beeraha Galmudug oo mudoba la taca alidiisu socotay .
Cadaala-darro Baahsan oo La Sheegay Inay Ka Jirto Xafiisyada Madaxda Dowladda
Iyadoo Fatahaado ay dhawaan ka dhace en deegaano hoosyimaada Gobolka Sha beelaha Hoose gaar ahaan Degmadda Afgooye ayaa waxa isa soo taraya baaq yada kala duwan ee loo jeedinayano dow ladda faderaalka Somaliya oo ku aadan in caawinaad lala gaaro dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaadahaasi. Wax aana horay qayla dhaan dowl adda usoo diray gudo omiyaha D/ Afgooye iyo masuuliyiinta ugu sarsa reysa Gobolka Sh/Hoo se taasi oo ay ku dalban ayeen in laga caawiyo fatahaadaha ku dhuftay qeybo Gobolka Shabeelaha Hoose.
Xildhibaan Dalxa oo kamid ah Xildhibaa nada deegaan doorashadoodu tahay Koo nfur Galbeed oo Radio Simba la hadlay ay aa waxa uu ka hadalay qeyla dhaanta ka soo yeeraysa dadka uu saameeyay fataha adda ka dhacday degmada Afgooye Gobol ka Shabeelaha Hoose.
Waxaana uu Xildhibaan Dalxa eedeeyn ka la duldhacay mas’uuliyiinta Dowlada Fedar aalka ah oo uu sheegay in Ahmiyad aysan si inayn dhibaatooyinka haysata dadka shacab ka ah ee uu sameyay fatahaadda.
Dalxa waxa uu tilmaamay in cadaalad da ro ay ka jirto dalka wax dadka masaakiinta ah daneynaynayaa aysan jirin taasi oo ka Jawaabeysa codsiyadooda ku aadan in la caawiyo.
Is-rasaaseyn dhimasho sababtay oo Shal ay ka dhacday Muqdisho
Wararka aan ka heleyno degmada Ya aqshiid ee gobolka Banaadir waxay sheeg ayaan in Shalay ciidamo ka kala tirsan bool iska iyo militeriga Soomaaliya ay isku ras aaseeyeen, waxaana is-rasaaseyntaas ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac.
Sarkaal ka tirsanaa militeriga Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cusmaan Xasan (Cusmaan Injeneer) ayaa la sheegay in lagu dilay is-rasaseyntaas oo socotay mudo kooban.
Sarkaalka la dilay waxaa la sheegay in uu watay ciidamo kale, isla markaana ay is ku dayeen inay xoog ku dhaafaan Bar Control oo ay ku sugnaayeen ciidamada boo liska degmada Yaaqshiid, sidaasna ay ku bil aabatay is-rasaaseyntu, waxaana la shee gay inay jiran dhaawacyo kale oo soo kala gaaray askarta labada dhinacba.
Wararku waxay intaas ku darayaan in sar kaalka ku dhintay is-rasaaseyntaas iyo ciid amadiisa ay maalmihii dambe si dhuumaal eysi ah qaad/jaad ku soo gelin jireen maga alada, sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan maamulka degmada Yaaqshiid oo shilkaasi uu ka dhacay.
Weli ma-jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalka oo ay uga hadlayaan is-rasaaseyntaas khasaara ha dhalisay ee ciidamada ka wada tirsan do wladda ku dhex martay gudaha magaalada Muqdisho. Xigasho:-radiodalsa.com
Maamulka Puntland oo ku dhawaaqay qabashada doorasho qof iyo cod ah
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si cad u sheegay in deegaanada Puntland uu ka qabanayo do orasho ‘qof iyo cod ah’, xili uu Dor raad khudbad ka jeedin ay ay furitaanka Shi rweynaha urur siya asadeedka xukuumadiisa ee Kaah.
Puntland ayaa hirgelisay hanaanka xisbiy ada badan, oo uu madaxweyne Deni uu she egay inay hiigsi u aheyd maamulkiisa, taasi oo ay Puntland ku taameysay tan iyo aas-aaskeedii.
Deni ayaa sheegay in maamulkiisu uu qabanayo doorasho ‘qof iyo cod ah’, taasi oo ka dhigan in dib loogu celinayo gacanta dadweynaha awooda ay ku dooran karaan madaxdooda, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxa uu si weyn uga mahad-celiyay maamuladii talada kaga horeeyay iyo guddiga doorashada oo uu sheegay inay iyaga laftigooda qeyb weyn kasoo qaateen sidii loo hirgelin lahaa hanaanka doorasho ee uu sheegay inuu ka hir-galayo Puntland, kaasi oo ah qof iyo cod.
"Duruufihii hore ee ay soo martay ayaa u saamixin inay fursadan oo kale helaan, taasi oo lagu hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah. Waxaan shacabka Puntland uga mahad-celi naya doorashadooda dhabata ah ee ay ku rabaan in dib loogu celiyo awooda doora sho” ayuu yiri madaxweyne Deni.
Wuxuuna intaas sii raaciyay "Puntland wa xay hormuud u noqon doonta dalka Soomaa liya isaguna inuu galo doorasho qof iyo cod ah”.
Hadalka Deni ee uu ku sheegayo inay deegaanada Puntland ka dhaceyso doo rasho qof iyo cod ah, ayaa waxa uu kusoo aadaya xili uu kasoo horjeedo in doorashada dalka ee 2020/21 loo qabto hanaanka qof iyo cod.
Xubno ka tirsan Shabaab oo lagu dilay da gaal ka dhacay Degmada Diinsoor
Xubno ka tirsanaa Ururka Al Shabaab, ay aa lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, sida Saraakiisha dowladda ay xaqiijiyeen.
Dagaalka ayaa wuxuu ka dhacay duleedka Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, kadib markii hawlgal ay ku dhaqaaqeen Ciidam ada Xoogga dalka & Ciidanka Maamulka Koonfur Galbeed.
Taliyaha Ururka 154-aad ee Ciidamada Dowladda qeybta 60aad Cali Xasan Cali (Taliye Carab) ayaa sheegay in howlgalka ay fuliyeen ay ku dileen Xubno ka tirsan Uru rka Al-Shabaab,isla markaana tuulooyin dhowr ah ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ay isaga baxeen.
Waxa uu sheegay dagalkii ka dhacay duleedka degmada uu ka dambeeyay kadib markii hawlgal ay ku qaadeen deegaanka Dii nsoor Wiigli, isla markaana dagaal dhacay lagu dilay Afar xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, sidoo kalena Ciidamada Dowlad da & kuwa Koonfur Galbeed ay weli howlg allada wadaan.
Inkastoo Saraakiisha Ciidamada dowlad da ay sheeganayaan guulahaasi, ayaa dhina ca kale Al Shabaab waxa ay sheegteen guulo inay ka gaareen dagaalkaasi oo ay ku dileen Ciidamo ka tirsan dowladda.
Xoogagga Shabaab ayaa waxa ay ku su gan yihiin deegaano badan oo ka tirsan Gob olada Koonfur Galbeed, halkaasi oo ay kula dagaalamaan Ciidamada dowladda & kuwa Amisom.
Taliska Booliska oo War kasoo saaray weerarkii ka dhacay Warta-nabada
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa War kasoo saaray weerarkii lagu qaa day Guri mingiska lagu tumo oo ku yaalla ag agaarka Iskoolka 15-May ee Degmada War ta-nabada ee Gobolka Banaadir.
Qoraa kasoo baxay Taliska Booliska ay aa waxaa lagu sheegay in Nin ku labisnaa deriska Ciidanka dowladda uu rasaas xo oggan mar qura ku furay Gu ri ay ku sugnaayeen dad sha cab ah laguna tumaayay xilig aas waxa loogu yeero ming iska.
Eedeysanaha falkaas geystay ayaa wa xaa Magacaabiisa lagu sheegay Cabdikariim Dheere, wuxuuna horay uga tirsanaan jiray Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed, isago ona goobta ka baxsaday weerarka kadib.
Xeer Ilaaliyihii hore ee Qaranka oo sheeg ay in la siyaasadeeyay dhisida Golaha Adeega Garsoorka
Xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in dalkaan uu mu hiim u yahay in loo dhiso Golaha Adeega Garsoorka si ay u sam eeyaan Maxkam adda Dastuu riga oo go’aan ka gaari karta wax kas ta oo muran ka dha sha.
Axmed Cali Daahir oo Wareysi siiyay Tv-ga Universal ayaa she egay in dalka Sooma aliya dad badan ay ka caga jidayaan in loo dhiso Golaha Adeega Garsoorka dalka,ayan mas’uul ka yihiin Mad axda Dowladda.
Waxaa uu sheegay in dhammaan waxya abaha muhiimka u ah dhismaha Golaha Ade ega Garsoorka, Sida Hay’adihii kamid noqon lahaa, Qareenada laga soo xuli lahaa iyo Bul shada rayidka,hayeeshee la siyaasadeeyay.
Ugu dambeyn waxaa uu ku baaqay in si deg deg ah loo dhiso Golaha Adeega Gars oorka oo dalka muhiim u ah si loo helo ama loo sameeyo Maxkamad Dastuuri ah.
Lix bil ka dib dhismo lagu bilaabay wad dada xiriirisa Muqdisho & Afgooye
Muddo lix bilood ah kadib waxaa Shalay dib loo bilaabay dhismaha waddada xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo hakad ku jiray lixdii bilood ee la soo dhaa fay,kadib weeraro ka dhacay. Dhismaha wadadaas oo ay iska kashanay aan dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaa wax aa dhismaheeda caqabado xoogan kala kulmay Injineero Turki ga ah oo dhisayay, ka dib markii qaarkood qar axyo lagu weeraray lagu dilay.
Sababaha ugu weyn ee loo joojiyay dhism aha wadadaas ayaa waxaa kamid ah qarixii weeynaa ee lagu weeraray Injineerada Turk iga u dhashay ee dhismaha waday 31-kii Bishii December ee sanadkii tegay ee 2019 oo khasaaro uu kasoo gaaray Injineerada qaraxaas.
Qaar kamid ah Bulshada isticmaasha wa ddada xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ayaa aad u soo dhaweeyay dhism aha lagu bilaabay wadadaas, iyaga oo she egay inay dhibaato culus ku qabeen,isla ma rkaana markii la dhiso ay siweyn u isticmaali doonaan.
Waddada xiriirisa Magaalooyinka Muqdi sho iyo Afgooye ayaa waxaa ay soo dhex-martaa deegaano badan oo ku yaalla duleed ka Muqdisho, sida Garas-baaleey, Weeyd oow, Ceelasha Biyaha, lafoole iyo deegaano kale oo dad isugu jira Ganacsato iyo Bara kacayaal ay ku nool yihiin.
Wasaaradda Caafimaadka oo faahfaa hisay Amar kasoo baxay
Waasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16-kii bishan soo saartay amar ay ku sheegayso in shah aadada safarka ee la xiriirta baarista COV ID-19 ee dadka dhoofaya ay ka qaadan karaan oo keliya shayba arka qaranka ee Muqdi sho.
Qoraalka ayaa ayaa in taas ku daray in wi xii int aas kasoo hara wasaar adda caafimaad ka ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan.
Dhinaca kalena, warar madax bannaan oo ay he shay Warb aahinta ayaa sheegaya in warqaddaas ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ay ka dambaysay kadib markii nin wata shahaado ay ku qoran tahay in laga helay cudurka COVID-19 uu 15-kii bishan ka degay mag aalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Ninkaas ayaa kadib markii lagu baaray Du bai laga waayey cudurka, kadibna la sii daayey.
Dawladda Soomaaliya ayaa weli baaray sa sida ninkaasi ku helay shahaado ah inuu qabo cudurka COVID-19, iyo halka laga bixiyey.
Sidoo kale warar madax bannaan oo ay heshay VOA waxay sheegayaan in diyaara ddii uu raacay ninkaas oo ahayd Daallo Airines laba toddobaad laga mamnuucay dal ka Imaaraadka Carabta.
Kulamo gaar gaar ah oo weli ka socda Magaalada Dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa ka socda kulamo gooni gooni ah oo u dhaxeeya Madaxda Sare ee Dowlad Goboleedyada ee ku sugna halkaas iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada,kuwaas oo looga hadlayo qabsoomida shirka.
Madaxweyne Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa waxaa ay kulan gaar ah la qaateen Madaxweynayaasha Maamulada Puntland & Jubbaland oo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo Dowladda Soomalaiya si xal looga gaaro ka hor Shirka Magaalada Dhuusamareeb.
Kulanka oo aha amid ay Albaabada ku xirnaayeen ayaa wararka la helay waxaa ay sheegayaan in looga hadlay sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland si loo guda galo Shirweynaha Madaxda Sare iyo Dowlad Goboleedyada.
Sidoo kale waxaa xalay kulan gaar ah Hoyga uu RW Kheyre uu ka degan yahay Magaalada Dhuusamareeb ku yeeshay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Madaxweynayaasha 5-ta Maamul Goboleed,waxaana kulankooda looga hadlayay sidii loo wajihi lahaa qabsoomida shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu wadaa in uu dhawaan ka furmo Shirka u dhaxeeya Madaxda Sare ee Dowladda iyo Dowlad Goboleedyad si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo aan ilaa iyo hadda aan la isku raacin nooca ay noqoneyso.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta oo Isniin ah waxaa ay ku wajahan yihiin Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug.
Wafdi hordhac u ah Safarka Guddoomiye Cumar Finish ayaa shalay gaaray Dhuusamareeb, kuwaasi oo isugu jiray xubno ka tirsan Xafiiskiisa iyo Agaasijmeyaal kamid ah Maamulka Gobolka.
Ujeedka Duqa Muqdisho ayaa waxaa uu yahay sidii uu uga qeyb geli lahaa Shirka Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyada uga furmayo Caasimadda Galmudug.
Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Xa